लाभांश प्रस्तावको प्रभाव नेप्सेमा, कारोबार रकममा ६८.५६ प्रतिशत बृद्धि | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर लाभांश प्रस्तावको प्रभाव नेप्सेमा, कारोबार रकममा ६८.५६ प्रतिशत बृद्धि
on: September 13, 2018 मुख्य खबर, लगानी
लाभांश प्रस्तावको प्रभाव नेप्सेमा, कारोबार रकममा ६८.५६ प्रतिशत बृद्धि
भदौ २८, काठमाडौं । बिहीवार नेप्से परिसूचक १ दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ । यस दिन परिसूचकसँगै कारोबार रकम र लगानीकर्ताहरुको सम्पत्तीमा पनि बृद्धि भएको छ । कारोबार रकम ६८ दशमलव ५६ प्रतिशत र बजार पूँजीकरण १ दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश प्रस्ताव गर्दै गर्दा त्यसको प्रभाव शेयर बजारमा परेको छ । परिसूचक १४ दशमलव १३ अङ्कले बढेर १ हजार २ सय ४४ दशमलव ८४ विन्दुमा पुगेको हो ।
त्यस्तै, ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्स १ दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेर २ सय ६४ दशमलव २७ अङ्क पुगेको छ । त्यस्तै, अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यस दिन कारोबार रकम बढेर रू.७२ करोड ९८ लाख पुगेको छ । त्यस्तै, बजार पूँजीकरण बढेर रू. १४ खर्ब ८२ अर्ब पुगेको छ । यस दिन निर्जीवन बीमा, लघुवित्त र जीवन बीमा समूह बाहेक कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्से परिसूचक उकालो लागेको हो ।
‘अन्य’ समूहको परिसूचक ३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले बढेको छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको शेयर मूल्य बढेपछि यस समूहको परिसूचक २२ दशमलव २९ अङ्कले बढेको हो । होटल समूहको परिसूचक १ दशमलव ७२ प्रतिशत र बैङ्किङको १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, विकास बैङ्क समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७६, वित्त कम्पनीको शून्य दशमलव ३६, जलविद्युतको शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले बढेको हो ।
त्यस्तै, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७, जीवन बीमाको शून्य दशमलव २ र लघुवित्तको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले घटेको छ ।
एनएमबी बैङ्कको रू.५ करोड ९४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस वाणिज्य बैङ्कको ४ सय १५ पटकको व्यापारमा १ लाख ७२ हजार ३ सय २२ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । यस बैङ्कको शेयर मूल्य रू.१४ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू.३ सय ५५ पुगेको छ । नेपाल सेवा लघुवित्त विकास बैङ्कको शेयर मूल्य ९ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेर रू. ४ सय ७२ पुगेको छ । त्यस्तै, भार्गभ बैङ्कको शेयर मूल्य ४ दशमलव ५४ प्रतिशत घटेर अन्तिम मूल्य रू. १ सय २६ मा सिमित रहेको छ ।
यस दिन ९१ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै, ६० कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने २२ कम्पनी स्थिर रहेका छन् । सो दिन १ सय ७३ कम्पनीको ७ हजार ४ सय ३६ पटकको व्यापारमा २७ लाख ११ हजार १ सय १० कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ६५ दशमलव ४२ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो १ दशमलव ५१ अङ्क रहेको छ । यसले बजार बुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।